အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေ အတွက် မရှိမဖြစ် ခံတပ်များ | OnDoctor
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေ အတွက် မရှိမဖြစ် ခံတပ်များ
By OnDoctor Editor	 On Apr 29, 2020 Last updated Apr 29, 2020
‘လူတစ်ခုပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကုဋေ’ ဆိုတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်။
တကယ်ပဲ လူတစ်ယောက်မှာ ပူပင်စရာက ၁၀ ကုဋေလောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ၅ ကုဋေလောက်ကတော့ ကျိန်းသေပေါက် ကျန်းမာရေးအတွက်ပူပင်ရတာဖြစ်မှာပါ။
ဒီထဲမှာမှ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ပူပင်မှုက အနည်းဆုံး ၃ ကုဋေလောက်ရှိနေမလားတောင်ထင်ရပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါ COVID-19 လို ရောဂါကြီးတွေက အစ သာမန်အအေးမိဖျားနာ၊ တုပ်ကွေးရောဂါတွေ၊ တခြားကူးစက်ရောဂါတွေအထိ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ဒုက္ခပေးမဲ့ ရောဂါပိုးတွေက များလှပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးကတော့ SARS-CoV-2 လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ ယခင်က ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးတဲ့ SARS ရောဂါ MERS ရောဂါတွေဖြစ်စေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းတူညီတာတွေ့ရပါတယ်။
ရောဂါပိုးတွေက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲ ဘယ်လိုရောက်ရှိသွားတတ်လဲ ??
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုတာ နှာခေါင်းပေါက်၊ ပါးစပ်ပေါက်တွေက စပြီးတော့ အဆုတ်ရဲ့ အတွင်းအကျဆုံး Alveolar sac လို့ခေါ်တဲ့ လေအိတ်လေးတွေမှာ အဆုံးသတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ၂၄နာရီမှာ လေ လီတာပေါင်း ၅သောင်း အထိရှူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကနေ ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ လေထဲက အောက်စီဂျင်က ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင်သန်နေစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ဒီလိုအရေးပါလှတဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်လာမှာ ကျွန်တော်တို့ကို အသက်ဓာတ်ပေးတဲ့ အောက်စီဂျင်တစ်ခုတည်းလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေကိုသာ အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးတစ်ခုနဲ့လဲတပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘေးမှာပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ၊ မှိုပိုးတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ တကယ့်ကို ခြောက်ခြားစရာပါ။
ဒီရောဂါပိုးတွေကလည်း ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ လေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် နှာခေါင်း၊ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ လေပြွန်၊ လေပြွန်ငယ်တွေကတစ်ဆင့် နောက်ဆုံးအဆုတ်ထဲအထိ ရောက်ရှိပွားများသွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ နှာချေ၊ချောင်းဆိုး၊တံတွေးစင်အောင် စကားပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဆီကို တနည်းနည်းနဲ့ ရောက်နှင့်ပြီးသားရောဂါပိုးတွေက နောက်လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကို ထပ်ရောက်သွားစေပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ဝင်သွားတဲ့ airborne နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သလို အနီးအနားကပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာ ကပ်တွယ်နေတဲ့ droplet တွေလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို နောက်လူတစ်ယောက်က ကိုင်တွယ်မိပြီး ရောဂါပိုးပါလာတဲ့ လက်နဲ့ သူ့ရဲ့ နှာခေါင်းတွေ၊ ပါးစပ်နဲ့ မျက်နှာကိုကိုင်တွယ်မိတဲ့ အခါမှာလည်း ကူးစက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်စေတဲ့ SARS-CoV-2 ကတော့ တခြားရောဂါပိုးတွေထက်ကို ပိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာကူးစက်စေနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
ကြောက်လိုက်တာ.. ဒါဆို အသက်မရှူရတော့ဘူးလား ?
မလုပ်ပါနဲ့။ အသက်မရှူရင်တော့ သေသွားပါလိမ့်မယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲအထိ ရောဂါပိုးတွေ ဝင်မလာစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ ခံတပ်တွေချပြီး တားဆီးကြည့်ရအောင်။
လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ရေသုံးပုံး စက္ကန့်၂၀ အနည်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ရင် စက္ကန့် ၄၀ လောက်အထိ စနစ်တကျ သေချာဆေးပါ။
လက်မှာကပ်ပါလာမဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေ အဲ့မှာကတည်းက သေသွားရင် ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းလေး ဘေးကင်းပါပြီ။
မိမိနှာချေ၊ချောင်းဆိုးချိန်မှာ တစ်ရှူး(သို့မဟုတ်) တံတောင်ဆစ်ကွေးနဲ့အုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ် အသိတရားဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဖြိုးပြည့်စုံဆိုထားတဲ့ ကျွန်တော့်သီချင်းစာသားလေးအတိုင်းပါပဲ။
“မျက်လုံး၊နှာခေါင်းနဲ့မျက်နှာ ပါးစပ်ရဲ့ဟိုးအဝေးမှာ” ကျွန်တော်တို့လက်တွေကိုငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ သတိတရားရှိရပါမယ်။
ဒီအသိတရား သတိတရားက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အတွက်တင်မကပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူသားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကြီးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပါ ထာဝရ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အာခံတွင်း၊ လည်ချောင်းနဲ့ နှာခေါင်းတွင်း သန့်ရှင်းရေး
လေထုကတစ်ဆင့်၊ ကျွန်တော်တို့လက်တွေကတစ်ဆင့် ခံတပ်နှစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်လာနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးမွားတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ညင်ညင်သာသာဆက်ဆံလို့မရတော့ပါဘူး။
ဒီအချိန်မှာ သူတို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အစပိုင်းကို ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာတွေစပြပါပြီ။
ကိုယ်ပူတာ၊ နှာစေးတာ၊ နှာချေတာ၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ လည်ချောင်းယားယံပြီး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်တာစတဲ့ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဝင်လာပါပြီ။
ဒီဝေဒနာတွေသက်သာဖို့နဲ့ ဝင်လာတဲ့ ပိုးမွှားတွေ ဆက်နယ်ကျွံပြီး အဆုတ်ထဲထိဆက်ရောက်မသွားခင် ဒီခံတပ်မှာ အပြတ်တိုက်ထားမှရပါမယ်။
ဘာတွေနဲ့ ပြန်တိုက်မလဲ ??
Povidone Iodine – ဒါကတော့ Betadine Gargle and Mouthwash (ဘီတာဒိုင်း ပလုပ်ကျင်းဆေးရည်) နဲ့ Betadine throat spray (ဘီတာဒိုင်း လည်ချောင်းဖြန်းဆေးရည်) တွေ မှာပါဝင်ပါတယ်။
Povidone Iodine က Broad spectrum ပိုးသတ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ရောဂါပိုး တော်တော်များများကို တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။
ယခင်က SARS နဲ့ MERS ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကို povidone iodine က ပိုးသတ်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်စေတဲ့ SARS-COV2ဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းရှိမရှိကိုတော့ Betadine နဲ့ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Povidone Iodine က တခြားသောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေအပြင် common cold ဆိုတဲ့ အအေးမိဖျားနာခြင်း ဖြစ်စေတဲ့ Rhinovirus နဲ့ တခြားဗိုင်းရပ်စ် မျိုးကွဲရာပေါင်းများစွာ၊ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ မှိုပိုးတွေကိုပါ 99.9% အထိသေစေနိုင်စွမ်းရှိပြီး ပိုးသတ်ဖို့ အချိန်ကလည်း ၁၅စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်။
နောက်ထပ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ Cerragelose ပါဝင်တဲ့ လူကြီးသုံးနဲ့ ကလေးသုံး ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိတဲ့ Betadine Nasal Spray(ဘီတာဒိုင်း နှာခေါင်းဖြန်းဆေးရည်) ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆေးရည်က နှာခေါင်းတွင်းမှာအလွှာတစ်ခုလို ကာထားပြီးရောဂါပိုးတွေကို ရှေ့ဆက် ပြန့်နှံ့မသွားနိုင်အောင် တွယ်ကပ်နေစေပြီးနောက် နှာရည်တွေနဲ့အတူ အပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့အထိ သိပ်နောက်မကျစေဘဲ ဘီတာဒိုင်းရဲ့ ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကာကွယ်ဆေးတွေကို မိမိရော မိသားစုဝင်တွေ အတွက်ရော ကြိုတင်အသုံးပြုထားနိုင်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သမျှအပြင်မထွက်ဘဲနေမယ်၊ မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Mask ကို စနစ်တကျတပ်မယ်၊ လက်ကို မကြာခဏ စနစ်တကျဆေးမယ်၊ လူတွေနဲ့ ၆ ပေအနည်းဆုံးခွာနေမယ် ၊ ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကာကွယ်ဆေးတွေပါ တွဲဖက်အသုံးပြုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရောဂါပိုးမွှားတွေအန္တရာယ်ကို ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
ဒါ့အပြင် တစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ်ခံအားကောင်းနေစေဖို့ အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသောက် ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင် နေထိုင်ပြီး အိပ်ရေးဝဝအိပ်စက်ပေးပါလို့ မှာချင်ပါတယ်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ဒီခံတပ်တွေနဲ့ စောင့်ရှောက်ရင်း ကျွန်တော်တို့တူတူကျန်းမာပျော်ရွင်စွာ ဒီကပ်ဘေးကိုကျော်လွှားကြရအောင်..